Arbanyooch Gimbot 7: Humnootiin hidhatan filannoo biyyaalessaa fulduraatiif sodaadha - BBC News Afaan Oromoo
Arbanyooch Gimbot 7: Humnootiin hidhatan filannoo biyyaalessaa fulduraatiif sodaadha
Aanaalee milishaawwan, humni addaa, poolisiifi humni tikaa mootummaa naannoon itti ijaaramanii jiranitti filannoo naga qabeessaafi dimokraatawaa adeemsisuun nu yaaddessa jechuun dhaabbani siyaasaa Arbanyooch Gimbot 7 Ibsa kenneen himeera.
Humnootin naannoleen hidhatan kunneen sirna dimookiraasii biyyttifis gufuu akka ta'an fi dhaabbileen siyaasaas itti yaaduu qabu jedhan barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Obbo Andaargaachoo Tsige.
'Kaampaasiin nama guutuu ta'e tokko hojjechuudhaaf iddoo ta'udha'
Seenaa bara 2018 keessa hin dagatamne
Magaalli Naqamtee akkamiin oolte?
Sochiin bilisummaa fi mirgaaf biyyattii keessatti taasifame abdii qabeessa ta'uu isaatin haala seera qabeessa ta'un socho'uuf gara biyyaatti deebine kan jedhan Obbo Andaargaachoon, haalli Itoophiyaa keessa jiru haala lola affeeru miti, biyyattii keessatti karaa naga qabeessa ta'en qabsaa'uun baay'ee barbaachisaa dha jedhan.
Morkiin lolaan yookin hidhannoon taasifamu biyyattii kan miidhu malee kan fayyadu akka hin taane obbo Andaargaachoo Tsige dubbatan.
Kana malees olaantummaa Seeraa mirkaneessuun gahee mootummaa ta'us, jijjiiramni amma dhufe akka hin gufannef mootummaa cinaa dhaabbannee hojjenna jedhan.
Dhaabbileen siyaasaa biroo fi lammiileen biyyattiis haala biyyattii keessa jiru hubachuun tokkummaan hojjechuu akka qabanis himan.
Dhaabbatni keenya erga biyyatti galee as gama hidhanoon socho'uun yookin rakkoo nageenyaan walqabatee gama mootummaas ta'ee qaama biraarraa komiin irratti dhiyaate hin jiru jechuunis Obbo Andaargaacho Tsige himan. Rakkooleen gama mootummaatin yoo jiraatanis mariidhaan hiikkamuu qabu kan jedhan barreessaa olaanaan Arbanyoch Gimbot 7 kun, loltootni dhaabbatichaa Eertiraa turan 300 hidhannoo hiikkatanii gara biyyaa seenan deebi'anii akka dhaabbataniif sochiin taasifamaa akka jiru dubbatan.
Kana malees, hidhatoonni dhaabbatichaa 550 ta'an biyyattii keessatti iddoo garaagaatti socho'aa turan gara kaampiitti akka deebi'aniif hojjetamaa jiraachuu himan.
Ingliziin dhimmi kiristiyaanoota balaaf saaxilamanii akka qoratamu ajajjee
Gaafii Gimbot 7 fi Arbanyoch Ginboot 7 gargar bahaniiru jedhuun kaa'eef deebii kanneniin, "namootni dhimma kana gaggeessaa turan namoota dhaabbaticha keessaa rakkoo naamusaan ari'amanidha" kan jedhan Obbo Andaargaachoo, dhaabbatichi bifa hin bittinoofneen ijaarrames jedhan.
Addi Bilisa Baasaa Biyyaalessaa Ogaadeen hiree ofii ofiin murteeffachuu irratti mootummaa Itoophiyaa waliin walii galuu hime
Addi Bilisa Baasaa Biyyaalessaa Ogaadeen, ONLF mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee nagaa mallatteesseera. Dhaabni kun siyaasa Itoophiyaa keessatti eessaa ka'ee eessa ga'e?
Manni Murtii US poolisiin duraanii Deerik Shoovin yakkamaa ta'uu mirkaneesse
Kilaboonni Ingiliiz hunduu Suppar Liig keessaa godaanan